Storj: maodely vaovao hanomezana vola ireo tetikasa loharano misokatra | Avy amin'ny Linux
Storj: maodely vaovao amin'ny fanangonam-bola amin'ny tetikasa open source
Darkcrizt | | hafa
Se manantena ny hitombo ny tsena fitahirizana rahona ho $ 92.49 trillion amin'ny 2022. Ny tsena dia anjakan'ny andrana teknolojia toa an'i Amazon, Google, Microsoft, ary IBM.
Androany, ny computing cloud dia tontolo ivo tanteraka aiza ny mpanome tolotra no mifehy tanteraka ny angona voatahiry ao anaty rahona.
ny Mpamatsy tolotra fitehirizana Orinasa rahona afovoany dia mitaky vola be amin'ny serivisin'izy ireo.
Ireo sarany ireo dia mety tsy midika ho an'ny orinasa lehibe kokoa, ny orinasa kely kokoa dia mety hahatsapa izany.
1 Momba ny serivisy afovoany
2 Rahona itsinjaram-pahefana
2.1 Ahoana no ifandraisany amin'ny fanodikodinam-bola ireo tetikasa loharano misokatra?
Momba ny serivisy afovoany
Amazon, ohatra, dia mitaky $ 23 isam-bolana amin'ny serivisy fitehirizana izay omeny.
raha mbola mety tsy hitantana ny angona amin'ny fomba tsy etika izy ireo, mbola azon'izy ireo ampiasaina ny manadihady angona.
Amin'ny tranga sasany, mpanome tahiry rahona ihany koa afaka mampiasa angon-drakitra voatahiry ao amin'ny mpizara azy hikendrena dokam-barotra natao manokana ho an'ny tompon'ny angona, zavatra heverin'ny orinasa maro ho manelingelina.
Ny ratsy indrindra dia ny sehatr'asa rahona ankehitriny no miasa amin'ny maodelin'ny mpizara izay manana teboka tokana tsy fahombiazana, ka azo inoana fa mandika data kokoa.
Fitehirizana rahona voafidy serivisy efa nanomboka nanambatra izy io amin'ny fizotry ny orinasa sy ny orinasa isan'andro.
Ireo mpanome tolotra toa an'i Storj sy Siacoin dia efa nanangana tsena azo antoka amin'ny alàlan'ny fanolorana ambaratonga fiarovana izay tsy azon'ny mpamatsy rahona mpizara raharaham-barotra mifanandrify.
Storj dia vahaolana fitahirizana fanapariaham-pahefana iray manontolo ary loharano misokatra izay manome maodely fandraharahana mitovy amin'ny Airbnb ho an'ireo mpampiasa manana fitehirizana sy fantsom-pifandraisana fanampiny.
Tamin'ny fihaonana an-tampon'ny Source Source Amerika Avaratra, Storj dia nanambara programa vaovao iray manitatra ny maodely famokarana vola miditra hanokatra tetikasa loharano.
Ny "Open Source Partner Programme" vao nambara tato ho ato mamela ny tetikasa open source hamokatra fidiram-bola isaky ny mitahiry ny angon-drakitra ao anaty rahona ny mpampiasa azy.
"Ny programa Open Source Partner Programme dia hanampy ireo orinasam-panokafana hisokatra malalaka sy maimaimpoana ary hampiasa vola amin'ny fitomboana," hoy ny CEO Ben Stubj, Ben Golub.
Raha ny marina, ny programa dia mety ho fanampiana lehibe ho an'ireo tetikasa loharano misokatra izay matetika voafetra amin'ny tetibola.
"Izy io koa dia hahafahan'izy ireo mahatratra bebe kokoa ao anatin'ny teti-bolany, manampy azy ireo hahazo tombony, hanafaingana ny sori-dalana na hanatratra tanjona hafa mifandraika amin'ny fitantanam-bola," hoy i Golub
Storj manara-maso ny fampiasana tambajotra ary mamerina ampahany betsaka amin'ny vola azo rehefa angona avy amina tetikasa loharano misokatra dia voatahiry eo amin'ny lampihazo.
ny sasany tetikasa open source no miditra amin'i Storj ary mampifangaro azy amin'ny vokatrao. Ireo tetik'asa ireo dia misy Confluent, Couchbase, FileZilla, InfluxData, MariaDB, Minio, MongoDB, Nextcloud, Pydio, ary Zenko.
Amin'ny lafiny kely, raha manana fitehirizana fanampiny sy fantsom-pifandraisana ianao dia afaka miditra ao amin'i Storj amin'ny maha-olona anao ihany koa.
Ahoana no ifandraisany amin'ny fanodikodinam-bola ireo tetikasa loharano misokatra?
Storj pmanome fitehirizana rahona voarindra sy zaraina blockchain atsinanana mampiasa habaka kapila avy amin'ny kapila nizara amin'ny alàlan'ny mpandraharaha node fitehirizana.
Antsoina hoe "tantsaha" izy ireo mamorona tambajotra azo antoka ho an'ny mpamorona, ekipa miasa, orinasa ary olon-kafa mila fitahirizana rahona azo antoka. Amin'ny alàlan'ny fampiasana encryption amin'ny lafiny client.
Storj dia miantoka fa ny tompona angona ihany no mahazo ny angon-drakitra. Ny maritrano nizara an'i Storj, hoy ny mpamokatra azy, miaro amin'ny fanafihana, manatsara ny fahamendrehana ary manatsara ny zava-bita raha oharina amin'ny fomba fitahirizana rahona nentim-paharazana.
Ny tambajotra Storj, Tsy toy ny fitahirizana rahona mahazatra, izy io dia hanome vola azo antoka maharitra ho an'ireo tetikasa loharano misokatra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Storj. Storj, hoy i Golub, dia manome 60 isan-jaton'ny vola miditra lehibe ho an'ireo tantsaha fitehirizana ary mizara ny 40 isan-jato ambiny amin'ireo mpamorona loharano misokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Storj: maodely vaovao amin'ny fanangonam-bola amin'ny tetikasa open source
GTK + tonga miaraka amin'ny fanatsarana ao amin'ny kinova 3.24.1 vaovao
Canonical dia mamoaka ny sary Ubuntu 18.04.1 nohatsaraina ho an'ny Microsoft Hyper-V